xukumo dil lagu fuliyay al shabaab - iftineducation.com
xukumo dil lagu fuliyay al shabaab
aadan21 / July 14, 2016
iftineducation.com – Xafiiska Xeer
Maxkamadda Darajada 1-aad ee Ciidamada Qalabka Sida, ayaa maanta xukuno kala duwan ku riday afar ruux oo lagu soo eedeeyay inay Al Shabaab ka tirsan yihiin, kuwaa oo laba ka midda ay dumar yihiin.
ee Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida, ayaa dacwad ku soo oogay C/shakuur Guure Siyaad Calasow (40 jir ah), Maryan Maxamed Siyaad Baraale oo loo yaqaan Batuulo (40 jir ah) iyo Falis Macow Sabriye Cali (50 jir ah), ka dib markii Xafiiska Xeer Ilaalinta Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida uu ku eedeeyay inay ka tirsan yihiin Ururka Al Shabaab, laguna so qabtay hub ay u hayeen Shabaab.
Kaaliyaha Maxkamadda Darajada 1-aad ee Ciidamada Qalabka Sida, G/dhexe Xasan C/raxmaan Aadan, ayaa sheegay in ay Maxkamadda ka hor qirteen in hubkii lagu soo qabtay ay u hayeen Al Shabaab.
Kaaliyaha, ayaa sheegay in Falis Macow Sabriye Cali ay isku xiri jirtay labada qof ee lala soo eedeeyay iyo dagaal-yahanada Al Shabaab, si ay hubka isugu kala gudbiso, iyadoona Falis lagu xukumay shan sano oo xabsi ciidan ah.
Kaaliyaha, ayaa sidoo kale ku dhawaaqay min sideed sano oo xabsi ciidan ah, oo Maxkamadda Darajada 1-aad ee Ciidamada Qalabka Sida ku riday C/shakuur Guure Siyaad Calasow iyo Maryan Maxamed Siyaad Baraale.
15 sano oo xabsi ciidan, ayay Maxkamaddu ku riday Maxamed Cabdi Xasan Cali (20 jir ah), markii Xafiiska Xeer Ilaaliyuhu uu ku soo eedeeyay in uu ka tirsan yahay Ururka Al Shabaab, gaar ahaan qaybta shirqoolada, laguna soo qabtay isagoo bistoolad ku hubeysan, uuna maleygaayay dhagar ka dhan ah muwaadiniin Soomaaliyeed.
G/dhexe Xasan C/raxmaan Aadan, ayaa ugu dambeen sheegay ciddii aan ku qanacsanayn xukunadan, inay rafcaan ka qaadan karto.
Dareenka Dumarka Waxa Uu U Qeeybsamaa Sadax Qeeybood ?
Sedex gabar baan shukaansadaa ilataliya